Shariif Xasan oo ka digay in la musuq maasuqo doorashada - Awdinle Online
Shariif Xasan oo ka digay in la musuq maasuqo doorashada
Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ka mid ah Musharaxiinta maalintii Afraad shirka uga socda Hoteelka Jasiira ee Muqdisho ayaa ka hadlay sida ay uga walaacsan yihiin in doorashada soo socoto uu hareeyo Musuq maasuq.
Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaa uu si cad u sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay bidhaamisay in doorashada dhexe ee dalka ay noqon doonto mid wareegga koowaad lagula kala baxo, taasina ay muujinayso sidda loo doonaayo in ay noqoto mid musuq hareeyay.
Waxaa uu xusay in umadda Soomaaliyeed ay si waafi ah ula socoto wixii ka dhacay Baydhabo, Jowhar iyo Dhuusamareeb oo dhammaantood dowladda dhexe Afduubatay ka dibna lagu kala baxay wareegga koowaad.
“Sidii loo maamulay doorashadii Baydhabo, sax ma nala aheyn sidoo kale tii Galmudug wixii ka dhacay Jowhar sax mana aheyn midaana siddaas oo kale ayaa la yiri”ayuu yiri Shariif Xasan.
Waxaa uu xusay in musharaxiinta maanta aysan dooneyn doorasho Musuq maasuq ku dhacda oo wareegga koowaad lagu kala baxo sidii maamuladii dowladda doorashadeeda abaabushay sidda uu sheegay Shariif Xasan.
Waxaa uu intaasi kusii daray “Waqti dheer ayaan soo joogay waxaan arki jirnay doorasho saddex wareeg gaarta oo la isku oomo, waayahan waxaan aragnay doorasho hal wareeg ah ma rabno doorasho hal wareeg ah, hal wareeg waan diidanahay in uusan xal ku imaan doonin ayaan aaminsanahay”
Shirka Musharrixiinta Xilka Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta galay maalintii Afaraad ayaa waxaa lagu casuumay Culumaa’uddiinka Soomaaliyeed, haweenka, dhalinyarada iyo ganacsatada waxaana laga dhageystay taladooda, waxaana lala wadaagay dareenka ay qabaan Musharrixiinta.
Musharaxiinta xilka Madaxweynaha ee ku shirsan Muqdisho ayaa sidoo kale gudoomiye u doortay Shariif Sheekh Axmed, Afhayeenka Guddiga ayaa loo doortay Ridwaan Xirsi halka xogheynta guddiga loo doortay Xuseen Cabdi Xalane.
Previous articleC/raxmaan C/Shakuur oo weerar afka ah ku qaaday Madaxweyne Farmaajo.
Next articleMusharixiinta iyo Beesha Caalamka oo shir xasaasi ah yeeshay